Umbuzo Umbuzo nje
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #360 by Dariussssss
Lona kufanele ube ngumbuzo olula kakhulu ... noma mhlawumbe ungabi njalo. Ngingumuntu othanda i-Airbus, ngiyakuvuma lokho. Futhi selokhu ngahlangana kwami ​​okokuqala nama-sims ezindiza, lowo mkhiqizi wezindiza wayengizithandayo. Ngakho-ke, ku-FGFS, FS2004 futhi manje usungenile FSX, azikho izindiza ze-Airbus ezinhle nezethembekile. Kukhona izindiza ze-payware kodwa angikwazi nje ukuzikhokhela.
Umbuzo uthi: Kuthiwani ngamanye ama-sim amabili,X-Plane futhi P3D, ikhona i-Airbus esebenza ngokugcwele esebenza kunoma iyiphi yayo?
Inkinga enkulu enginayo ngezindiza ze-Airbus, ngqo uThomas Ruth A330 / 340 ne-PA A380 e FSX wukuthi i-PFD ilahlekelwa yinto eyodwa elula. I-IAS tape ayikhombisi okubekwa ngaphezulu futhi okugcwele, futhi indiza uqobo ayiyesabisi. Akunandlela yokundiza kahle. Sekuyizinyanga ngizama ukuthola usizo kulokho kodwa akekho, kukho konke FSX umphakathi ufuna ukungisiza.
A320 multi-livery iphakethe, iyatholakala lapha at Rikoooo muhle kakhulu, futhi ngisuke ngizifunela ukuze uthumele abanye izinto, njengomuntu PFD ukuba izindiza okukhulunywa, noma okungenani kuya TR A330. Ukubuzwa yonke indawo indlela yokukwenza ... futhi nje udlale ngesikhathi sami.
Ukuya emuva FGFS ngempela kukho wami wokugcina kodwa Mina bayokujabulela ukukwenza uma kukhona ezinye option.
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #367 by Gh0stRider203
UMA Akufani ukulibonisa, ungase ukwazi ukuhlela ifayela aircraft.cfg ukulungisa lokho. Mina owawunakho ukwenza lokho kanye CLS DC-10-30F. Bona shorted nawe mayelana 4.5K zamalitha uphethiloli kwehlisa okwedlulele isisindo max kahle ngezansi lokho empeleni kwakuwukugcwaliseka.
Umbhangqwana ukulungisa ifayela aircraft.cfg futhi kwaba ke kufanele kube njani. Manje ngingasho fly max ebanga izindiza akunankinga
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #369 by Dariussssss
Vele ayibonisi ke, futhi ifayela CFG, ijubane kwesibaya kuyinto nhlobo ngiyaphupha ... 120 kts? Vele sibheke ezinye abanikeze asebenza nabo kokufika yevidiyo ngo-YT futhi uzobona ukuthi empeleni phakathi 155 futhi 160, ngakho-ke ngezinye 120 ... uzogcina ezindabeni.
Ngizozama ukuthi, ngokuqinisekile.
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #371 by Gh0stRider203
Ngithathe Gonna kokuba sibheke ifayela CFG wami Dash Eme-8 futhi siqiniseke ukuthi sucker isethaphu kwesokudla cuz Angikho ngisho ukuthola VALA yohlu max ngalolo sucker futhi lokho ngempela ukusiza lol
Asikwazi fuel angenamkhawulo uma simuke futhi refueling maphakathi no-air is engamukeleki.
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #372 by Dariussssss
Aircraft onjiniyela s ... g nathi ....
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule - iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #373 by Gh0stRider203
Inhlanhla ukuthola Me ukuba iphikisane nawe ngalolo LMAO eyodwa
Ya azi it uyokhanda NICE uma lapho abantu ukwenza lezi izindiza i-Flight Sim empeleni uyocwaninga f'in 'kuqala ya bazi ???? >.>
Ngicabanga Ngizohamba beshisa khona okuthile izimbobo isibhakabhaka ngesinye Mach 2 ku Concorde. CHA ZETHEMBISO ngeke nemicimbi a kwemibhoshongo ambalwa endleleni lol
Ukuhlela kokugcina: iminyaka engu-2 izinyanga ezingu-8 ezedlule Gh0stRider203.
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #386 by Dariussssss
Ngicabanga, kulabo onjiniyela, kuyoba okwanele ukuze nje ukukhuluma pilot emhlabeni wangempela.
Mayelana A340 PFD Izinkinga zami ... kahle ke Kulula ukushintsha ezinye amagugu kufayela indiza .cfg, kodwa olushintsha lutho. I PFD alibonisi kokubili overspeed futhi kwesibaya., Ngakho ngicabanga ukuthi kulungile. Lokho kufanele zishintshwe endaweni ethile VC noma panel amafayela Anginayo inkomba indlela yokukwenza.
Ngangihlanya ngenxa yalokhu, ukuthi empeleni ngafaka i-FGFS ne-A346 ... ukudumala okubi kakhulu, angikwazi nokuyiqala lapho, ngakho-ke FSX futhi silwele ukulungisa leyo PFD.
Ngiyabonga wathola: 19
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #387 by Colonelwing
ngenkathi umzabalazo ,, ukuphoxeka isikhashana ,,, kukhona into omuhle ngalokhu ,,, olufundayo.
Its akulula ngaso sonke isikhathi ukufunda kule impilo ,, Ngiyavuma ,, kodwa ngezinye ukuqasha izama kanzima ukuxazulula inkinga yakho,
nokuthi kuyinto isiqondiso umzila isikhashana ukuphumelela ukuza ...
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #389 by Dariussssss
Hey Colonelwing, kwenzenjani?
Nokho, alisebenzi ngaleyo ndlela nami, okungenani hhayi Air Sims. Uma into akusebenzi ukuba bin kadoti ke samaqanda. Awufuni ukusaphaza yisiphi isikhathi nezinzwa kuso.
Ekuphileni okungokoqobo, uyavuma kubangele impilo yami yonke kuwumshikashika, kodwa lokho omunye indaba, hhayi kule ndawo.
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #392 by Gh0stRider203
kahle, nonke nina ngempela kufanele ukwenze ukubheka Wikipedia uma kuziwa izindiza info nangokwethembeka ... okungenani commercial.
Isikhathi ukudala page: 0.332 imizuzwana